मुक्तीनाथको मन्दिरमा १०८ धारा नै बनाउनुको खास कारण के हो ?, बाबाले खुलाए १०८ धाराको रहस्यो ! पढेर शेयर गर्नुहोस् – Namaste Dainik
मुक्तीनाथको मन्दिरमा १०८ धारा नै बनाउनुको खास कारण के हो ?, बाबाले खुलाए १०८ धाराको रहस्यो ! पढेर शेयर गर्नुहोस्
May 22, 2020 NamastedainikLeaveaComment on मुक्तीनाथको मन्दिरमा १०८ धारा नै बनाउनुको खास कारण के हो ?, बाबाले खुलाए १०८ धाराको रहस्यो ! पढेर शेयर गर्नुहोस्
हिन्दु र बौद्धमार्गीको पवित्र तिर्थस्थल मुक्तिनाथमा बर्षेनी लाखौको सख्यामा भक्तजनहरुको भिड लाग्ने गर्छ । एउटै शैलीमा निर्माण भएको मुक्तिनाथमा हिन्दु र बौद्धमार्गीले आ आफ्नै परम्परा अनुसार पुजा गर्ने गर्छन् । करिब ३ हजार ८ सय मिटर क्षेत्रफलमा रहेको मुक्तिनथ मन्दिर परिसरमा १०८ धारा रहेका छन् ।उक्त धारमा नुहाए पाप पखालिन्छ शुद्ध भइन्छ भन्ने जनविश्वास रहेको छ । हिन्दुले मुक्तिनाथमा गएर विशेष रुपमा विष्णुवभगवानलाइए पुज्ने गर्छन् । बैद्धमार्गीहरुले लुवाङ ग्याल्बो अर्थात नाग राजा मानेर पुजा गर्छन् । हिन्दु धर्मअनुसार मुक्ति प्रप्तीको लागि ब्रह्मणले योगरुप यज्ञ गरेको र त्यसबाट सृष्टि गर्ने शक्ति पाएको भन्ने मान्यता रहेको छ । ब्रह्माले यज्ञ गर्दा अग्निरुपमा शिव र जलरुपमा विष्णु होताको रुपमा ब्रह्मा बसेका थिए ।
हिमालय पर्वतमा अवस्थित मुक्तिनाथमा पौराणिम मान्यता अनुसार विष्णुको निवास रहेको बताइन्छ । यीनै कुरालाइृ विश्वास गर्ने हो भने भगवान शिवले जलान्धर नामको असुरसाग युद्ध जित्न सकेनन् । त्यतिबेला शिवलाई विष्णुले मद्दत गरेका थिए । पौराणिक कथाहरुमा भनिएअनुसार जालन्धरकी पत्नी बृन्दाले सतीत्व बचाएर राखेकी थिइन् । तबसम्मा जलान्धरालाई कसैले वृन्दाको सतीत्व नष्ट गर्न सक्दैनथे । यो वेला विष्णुले साथ दिएपछि बृन्दाको सतीत्व नष्ट भएको थियो ।
त्यसकारण बृन्दाले विष्णुलाई शिला,रुख,झारपात र घाँस भएर जीवन व्‍यतीत गर्नु परोस भनेर श्राप दिएकी थिइन् । बृन्दाकै श्रापको कारण विष्णुले शालिग्राम शिला,पिपल,तुलसी र कुश भएर जन्म लिनु परेको थियो । दन्तेकथाको अनुसार मुक्तिनाथ क्षेत्रलाई मोक्ष प्राप्तीको लागि लिइन्छ । जहाँ विष्णु भगवानले शालिग्राम शिलामा निवास गरेका छन् । बौद्ध भिक्षु पद्यसम्भव बौद्ध धर्मको प्रचार प्रसारको लागि तीब्बतीह्रुले मुक्तिनाथ क्षेत्रमा गएको थिए ।
सन् २०६२ सालमा तत्कालीन द्धन्दबाट नेपालीले मुक्ति पाउन भनेर नेपाली भक्रजनहरु मुक्तिनाथ गएर १०८ शालिग्रामलाई हरिद्धारमा लगेर गंगाको तटमा सवालाख गाईको दूधले नुहाएर सवाकरोड बत्ति बाली पुजा गरेका थिए । यसरी गाईको दूधले शालिग्राम नुहाएपछि गंगाजीको पानी पुरै सेतो देखिएको थियो । सवा करोड बत्ति बालेको समयमा राती पनि पुरै गंगाको तट दिनको उज्यालो झै झिलिमिली देखिएको थियो र शहरभरि घ्यूको बत्ति बालेको बास्ना फैदिएको थियो । लामो समय चलेको गृहयुद्धबाट आम नेपाली र सिंगो नेपालले मुक्ति पाउको कुरा पौराणिक ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ ।
बुद्धको पाईला जसले सेयर गर्छ उसलाई ७ दिन भित्रै निकै ठूलो खुसीको खबर प्राप्त हुनेछ!ॐ: लेखि सेयर गर्नुहोस् मनोकामना पुरा हुनेछ !
सनिवार जन्मेका मन्छेको भग्या र स्वभाव कस्तो हुन्छ जन्नुहोस।
पवित्र देवस्थल अमरनाथको बरफ शिवलिंगको पहिलो तस्वीर, दर्शन गरि सियर गर्नुहोस।
June 4, 2020 Namastedainik
भाग्यमानीले मात्र देख्ने यो दुर्लभ जीउँदो दाहिने शंखको दर्शन गर्नुहोस ।